यी पाँच काम गरेमा आफ्नो मनले चिताएको पुराहुन्छ, शेयर गरौ – Online Nepal
March 11, 2020 607
सोमबारको दिन देवताको पनि देवता आरध्यदेव महादेवको पूजा गरिन्छ ।
अविवाहित नारीले सुयोग्य बर पाउन तथा पतिको दीर्घायूको कामनासहित विवाहिता नारीले भगवान शिवको पूजा आरधना गर्ने गर्दछन् । यो दिन सेतो रंगको कपडा लगाउने र सेतै रंगको वस्तुहरुको दान गरेमा विशेष फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास गरिन्छ ।
Prevश्रीमतीले विवाहपछि पनि प्रेमीलाई बिर्सन नसकेपछि श्रीमानले यस्तो सम्म गरे !
Nextचीनद्वारा १५ मिनेटमै कोरोना भाइरस भए-नभएको पत्ता लगाउन सकिने नयाँ विधिको आविष्कार
अमेरिकामा मृ*त्यु हुनेको संख्या ३४ हजार नाघ्यो, १५ देशको यस्तो छ अवस्था
मनिषा कोईरालालाई भारतले चेतावनी दियो ! अन्तत रबि लामिछाने रिसले आगो हुँदै यस्तो भने (भिडियो हेर्नुस)